DhDUOn fayyadamummaa ummataa caalaatti mirkaneessuuf hojjetaa jira
DhDUOn fayyadamummaa ummataa caalaatti mirkaneessuuf hojjetaa jira Featured
DhDUOn dhaabbilee haadholii afran ADWUI keessaa isa tokko yoo ta’u, aantummaa uummatasaaf qabu mirkaneessuuf hojjechaa kan ture yoo ta'u, jijjiirama barbaadamu yeroo gabaabaa keessatti galmeessisuu irratti duubatti harkifannaan calaqqisaa tureera. Kunis ummatni fayyadamummaansaa jalaa hubames golee afaraniin qabsootti akka seenu taasiseera.
Dhimma kana ilaalchisuun gaafdeebii Gaazeexaan Bariisaa, Ittigaafatamtuu Waajjira Giddugaleessaa DhDUO Aadde Adaanach Abeebee waliin addaatti taasise akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessineerra.
Bariisaa: DhDUO kaleessaafi har’aa akkamiin ibsitu?
Aadde Adaanach: DhDUOn dhaaba aantummaa ummataa qabatamaan mirkaneessuuf dhaabateedha. Fayyadamtummaa ummataa gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaatiin jiran qabatamaan mirkaneessuuf hojjetaa tureera. Bu’aawwan argamanis salphaa miti. Haata'u malee miira itti gaafatamummaafi hirmaannaa hawaasaa mirkaneessuun hojjechuu dhabuun, rakkoo bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraa rakkoolee gurguddoo hojii dhaabichaa keessatti mul'achaa turaniidha. Dhaabichi yeroo ammaa qabsoo ummata bal’aatiin injifannoowwan guguddoo galmeessisaa jira. Deggarsa hawaasaa humna godhachuun fayyadamummaafi aantummaa ummataa mirkaneessuuf hojjechaa jira.
Bariisaa: Kanaan dura sochii dhaabichaa maaltu duubatti harkisaa ture?
Aadde Adaanach: Hooggantootni dhaabicha geggeessaafi keessa hojjechaa turan miira aantummaa ummataa qabuun sosocho’aa hin turre. Faaydaa ummataa mirkaneessuuf dhabachuurra faaydaa dhuunfaa isaaniif dursa kennaa turan. Gochi kun babal’achaa dhufuusaatiin qabsoo cimaan ummata biraa akka ka’uuf sababa ta’eera.
Bariisaa: Rakkoolee uummata qabsoof kakaasan furuuf dhaabichi tarkaanfii akkamii fudhachaa jira?
Aadde Adaanach: Haaromsa gad fagoo taasifamaa jiruun yeroo ammaa komiin hawaasa biraa ka’aa ture deebii argachaa jira. Hooggantoota aantummaafi quuqama ummataa hinqabne sakatta’uun tarkaanfiin sirreessaa irratti fudhatamaa jira.
Bariisaa: Tarkaanfii haaromsa gadi fagootiin fudhatamaa jiruufi amantaan hawaasni dhaabicharraa qabu maal fakkaata?
Aadde Adaanach: Amantaa hawaasni dhaabicharratti qabu daran dabalaa jira. Keessumattuu sochii dhaabichi rakkoolee sassaabdummaa kiraa, saamicha lafaa akkasumas faaydaa lammiilee ukkaamfamee ture furuuf taasisaa jiru daran jajjabeessaadha.
Bariisaa: Bu’aaleen galmaa'aa jiran akkamitti argaman?
Aadde Adaanachi: Bu'aaleen galmaa'aa jiran kan argaman qabsoo hawaasaa golee afraniin taasifamaniini. Gochi sassaabdummaa kiraa babal’achuunsaa hawaasni qabsoo walirraa hincinne akka taasisuu akkasumas dhaabichi dhaabbatee adeemsasaa akka sakatta'uuf sababa ta'eera.
Dhaabichi dhaaba ummata Oromoof dhaabate ta’uusaa qabatamaan mul'isaa jira. Sochiin haaromsa taasifamaa jirus karaa iftoomina qabuun hanga dakaatti kan ittifufu ta'a.
Bariisaa: Fayyadamtummaa hawaasaa qabatamaan mirkaneessuuf kutannoon hooggantoota sadarkaa sadrkaan jiranii maal fakkaata?
Aadde Adaanachi: Kutannoo hooggantoonni dhaabichaa sadarkaa godinaaleefi aanaaleee fayyadamummaa ummataa mirkaneessuuf taasisaa jiranii laafaa waan ta'eef haaromsichi hanga gandaatti jijjiirama barbaachisu akka argamsiisuuf dhaabichi hojjechaa jira. Ummata bakka buuneef qabatmaan hin hojjennu taanaan ummatni abbaa aangoo ta’e nubaachuu hindanda'u.
Bariisaa: Hooggantoota dhaabichaas ta’e kanneen ummata bal’aa bakka bu’anii hojjechaa jiranirraa maaltu eegama? Kaleessarraa maal barachuu qabu?
Aadde Adaanachi: Ummatni kaleessa miira tokkummaatiin kallattii afraniin mirgasaa kabachiifachuuf qabsaa'aa ture har’as yoo miidhame obsi inni nuuf qabu xiqqaadha. Taa’umsi irra teenyee hojjennu kun kan ummataati. Ummataaf of kenninee hanga hinhojjeeneetti lammiif quuqamuu hindandeenyu. Murteewwan darban mara keessatti hawaasa bal’aa hirmaachisuun abbummaasaa mirkaneessuufi iftoomina babal’isuu waan ta’eef dhimma kanarratti xiyyeeffannoon hojjechuu qabna.
Kanaan dura dhimma maastarpilaanii waliin walqabatee rakkoo uumameen miidhaan qaqqabe barsiisaadha. Ummatni maastar pilaanicha hinbarbaannu jedhee gamaafi gamanaa waan ka'eef akka haqamu ta'eera. Dhimma hawaasaa furuuf hanga kaanetti miira kutannoo siyaasaa haqa hawaasaaf dhaabate qabaachuun barbaachisaadha.
Bariisaa: Fuulduratti gahumsa hooggantootaafi hudhaalee hooggansa keessatti mudatan furuuf waanti karoorfame jiraa?
Aadde Adaanachi: Gahumsa hooggantootaa sadarkaa sadarkaan cimsuuf leenjiin kennamaa jira. Kun ammoo hudhaalee jiran waliin furaa aantummaafi fayyadamummaa hawaasaa qabatamaan mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa taphata.
Bariisaa: Sochii warraaqsa dinagdeefi haaromsa gadi fagoo Oromiyaa keessatti eegalame milkeessuuf shoorri hooggantoota caasaalee garagaraafi hawaasaa maal ta’uu qaba jettu?
Aadde Adaanachi: Hoggantootni caasaalee gara garaa imaanaafi ittgaafatamummaa kennameef haqummaafi si’oominaan milkeessuuf hawaasa abbaa aangoo ta’e waliin hidhata uumuun hojjechuun isaanirraa kan eegamu yoo ta’u, hawaasni fayyadamummaasaa mirkaneeffachuuf socho’us hordoffii barbaachisaa taasisaa dhaabasaa waliin hiriiruutu irraa eegama.
Bariisaa: Yeroo keessan aarsaa gochuun gaafdeebii nuwaliin taasistaniif guddaa isin galeteeffanna.
Aadde Adaanachi: Isinillee sochii DhDUOn yeroo ammaa taasisaa jiru dubbistootaaf nuuf gahuuf deggarsa ogummaa nuuf taasistaniif galatoomaa.
Aadde Adaanach Abeebee
Torban kana/This_Week 9641
Guyyaa mara/All_Days 1819061